तत्काल सैनिक शासन लागू गर्नुपर्यो’ भन्दैँ नेपाली सेनालाई कस्ले पठायो चिठ्ठी ? मुलुकभर मचियो हङगामा ! - News20 Media
तत्काल सैनिक शासन लागू गर्नुपर्यो’ भन्दैँ नेपाली सेनालाई कस्ले पठायो चिठ्ठी ? मुलुकभर मचियो हङगामा !
June 6, 2021 June 6, 2021 N20LeaveaComment on तत्काल सैनिक शासन लागू गर्नुपर्यो’ भन्दैँ नेपाली सेनालाई कस्ले पठायो चिठ्ठी ? मुलुकभर मचियो हङगामा !
काठमाडौं । सैनिक संगठनमा अवकाश प्राप्त सेनाहरु पनि जीवित रहुन्जेल सम्म अवकाश प्राप्त भएको मानिदैन सेनाहरुले महसुस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।मुलुकको शक्ति नै सेनाहरु हो । मुलुक भन्दा ठुलो नेताहरू र विक्रम सम्वत २०७२ साल जारी संविधान होइन । संविधान फेरि पनि बनाउन सकिन्छ ।
यसकारण मुलुकमा अब तत्काल सैनिक शासन चाहिएको छ । मुलुक असफलता तर्फ गइरहेको अवस्था छ समयमा सेनाहरुको ध्यानाकर्षण होस ।सेनाहरु चुप किन ? सेनाहरु मुकदर्शक किन ? अब सेना आउ नेताहरूको शासन बाट पार लगाउनुपर्छ । अब सेना आउ नेताहरुको शासन बाट मुक्त गराउनुपर्छ ।
मुलुकको विगतको घटनाक्रम र हालको वर्तमान परिस्थिति बारे सेनाहरु स्वयंलाई नै थाहा छ कोही पनि सेनाहरु अनभिज्ञ हुनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन । मुलुकमा राजनीतिकको आडमा घिन लाग्दो कार्य भएको अवस्था छ । नेताहरूले नाटकीय चित्रण प्रस्तुत गरिरहेका छन । सेनाहरुले पनि नेताहरूको नाटक मंचन र नाटकीय चित्रण हेरी रहनु भएको होला । सेनाहरु चुप किन ?
विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन सकेनन । यसप्रकार नेताहरू असक्षम र असफल साबित भएका छन । मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर दिनदिनै गुजारा गर्नेहरुको लकडाउनमा कतिपयको घरहरूमा चुल्हो नबल्ने आदि इत्यादि अवस्था पनि छ ।
पहिलो चरणको कोरोना भाइरस संक्रमणमा पनि खाद्यान्न सामग्रीहरुमा व्यापक कालोबजारी र महँगी बढाइएको थियो । खाद्यान्न सामग्रीहरु र ग्यासहरु लुकाइएको थियो । दोस्रो चरणको लकडाउनमा सोही प्रक्रिया यथावत अपनाइएको छ । बिरामीहरु अस्पतालहरुमा समयमा भर्ना, उपचार, भेन्टिलेटर र अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएको अवस्था छ ।
केही औषधि पसलेहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको नक्कली औषधिको बढी मुल्य लिएर बेच्ने गरेको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ । मुलुकमा ल्याउने खोपहरुमा पनि कमिसनको कुरा आएको सुनिएको छ । मुलुकमा बिजोग छ बिजोग अवस्था । सेनाहरु चुप किन ?
कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको भयावह र जटिल अवस्थामा नेताहरूको बीच सत्तालाई लिएर पटकपटक कहिले बालुवाटार त कहिले शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको निवास, पार्टी कार्यालय, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस र सुविधा सम्पन्न होटलहरुमा बैठक बस्ने गरेकोछ । कोरोना संक्रमणको महामारीमा नेताहरुको मोजमस्ती छ । नेताहरूलाई सत्तामा भएको मजा बेग्लै छ ।
सत्तामा भएपछि सेवा सुविधाहरू थुप्रै लिन पाइन्छ, चाकरी पाइन्छ, रातदिन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाहरुको सलाम खान पाइन्छ । मुलुकको ढुकुटीको साँचो आफ्नो हातमा हुन्छ । ढुकुटी रित्याउन पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू भ्रमण लगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध हुन्छ ।
नेताहरूको आजसम्मको क्रियाकलाप र नाटक मंचन देखि सकियो । नेताहरूको लागेको बानी कहाँ हराउँछ र ? सरकार फेरबदल र परिवर्तन भएता पनि फेरि फेरि केही समय पश्चात नेताहरुको नाटक मंचनको प्रक्रिया शुरुआत हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । मुलुकले नेताहरूबाट सहजै निकास पाउने अवस्था देखिदैन । यसकारण अब मुलुकमा तत्काल सैनिक शासनको आवश्यकता छ ।
प्रधानसेनापति थापाले अकस्मात दिए सेनालाई सतर्क रहन निर्देशन।।तयारी यस्तो छ?
ओलीलाई अर्को झट्का, फेरी संसद पुनःस्थापित हुने निश्चित